တစ်ခုက SSD ကို မှစ. ပျောက်ဆုံးသွားသော Recover ဒါမှမဟုတ်ဖျက်ပစ်မှာ Data | Data Recovery for SSD
တစ်ခုက SSD ကို မှစ. ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့တည်းမဟုတ်အားဖျက်သိမ်းပြီးမှာ Data Recover လုပ်နည်း
နေအိမ် → တစ်ခုက SSD ကို မှစ. ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့တည်းမဟုတ်အားဖျက်သိမ်းပြီးမှာ Data Recover လုပ်နည်း
တစ်ဦး SSD ကိုထံမှပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ် data တွေကိုပြန်လည်ထူထောင် (Solid State Drive) ရှုပ်ထွေးခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး.
သေချာစေရန်, SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe နှင့်အတူ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသုံးလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအဖြစ်ရိုးရှင်း.
*ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ, SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည် ပြင်ပ SSD ကို drives တွေကို, က system ကို drives တွေကိုမှထမြောက်ဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါ.
SSD ကိုများအတွက်RescuePRO® Deluxe နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအတွက်ရရှိနိုင် Windows® နှင့်တစ်ဦး မက် ဗားရှင်း.
ဒီမှာ Windows ဗားရှင်းကိုရယူပါ……
ဒီမှာက Mac ဗားရှင်းကိုရယူပါ….
သင့်ရဲ့ SSD ကိုကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့ပြင်ပ SSD ကို drive ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ကြောင်းအာမခံထား.
1. စတင် RescuePRO® သငျတို့သလုပ်ဆောင်ချင်နာလန်ထူနည်းလမ်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ – ဖိုင်မှတ်တမ်းအကြောင်းအရာအားဖြင့် Recover (ပုံစံ) သို့မဟုတ် filesystem အားဖြင့် Recover (undelete).
ဖိုင်မှတ်တမ်းအကြောင်းအရာအားဖြင့် Recover သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကို device ကို scan နှင့်ဖိုင်စနစ်ကိုပျောက်နေရင်တောင်ဖိုင်အမျိုးအစားအကြောင်းအရာအသိအမှတ်ပြုမှုအားဖြင့်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူပါလိမ့်မယ်.
filesystem အားဖြင့် Recover တစ်ဦး undelete function ကိုဖြစ်ပြီးခိုင်လုံသောဖိုင်စနစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ recover ဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင် ဖိုင်မှတ်တမ်းအကြောင်းအရာ, လာမယ့် screen ကိုသငျသညျဖြစ်စေဓါတ်ပုံများကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, audio / ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်အခြားဖိုင်များ.
2. Choose your removable media from the list (ကို default options များ RescuePRO run သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သုံးပါနှင့်မျှမ drive ကိုစာတစ်စောင်သင့်မီဒီယာမှတာဝန်ပေးအပ်ထားလျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mode မှာသင့်မီဒီယာကိုကိုယ်စားပြုသော drive ကိုစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကိရိယာကိုသုံး).
ကို Select လုပ်ပါ START ပုံရိပ်ဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်.
3. Once the scan completes you will receivealist of recovered files. ဖိုင်တွေကိုအလိုအလြောကျ hard drive ကိုမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်.
ဖိုင်တွေကိုကြည့်ရှုရန် Output Folder ကိုကလစ်နှိပ်ပါ:
ဒါပဲ! သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုယခုထွက်ရှိ folder ထဲမှာကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်.
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေနဲ့အတူ drive ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, အားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖိုင်တွေကိုအခြားသိုလှောင်မှုကိရိယာသို့မဟုတ်စနစ်အတွက်အခြား drive ကိုအက္ခရာသိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်သည်. သငျသညျ recover ချင်သော Drive ကိုမှဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်မနေပါနဲ့.
သတိရ ကျေးဇူးပြု., သင်တစ်ဦး hard drive ကိုမှဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, hard drive ကိုပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်FILERECOVERY®ကိုသုံးပါ.
သင်ရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းတွေနဲ့ data တွေကို recover နဲ့ကြည့်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါလျှင်, ကျွန်တော်နှင့်အတူသငျသညျကူညီနိုင်ပါတယ်အခြားအခြေအနေများရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေးစင်တာများထဲမှတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူပညာရှင်များကြုံတွေ့ခဲ့ကြ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေးစင်တာများသို့ဆက်သွယ်ရန်, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ် >>> Data Recovery စင်တာများ<<<< ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်နှင့်အတူ, ကျနော်တို့န့်အသတ်အခမဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပူဇော်. သငျသညျမရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ထားတဲ့ version ကိုမတူညီတဲ့ဗားရှင်းအပေါ်မည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများရှိပါကသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်